Jesu aive mutema uye anobva kuAfrica, maererano neakawana achangobva kuwanikwa - AFRIKHEPRI
Jesu akanga ari mutema uye vekuzvarwa kweAfrica, maererano neshoko rakangobva kuwanikwa
Jesu aive mutema uye wedzinza reAfrica
UChikwata chevanochera matongo vanobva kuYunivhesiti yeTel Aviv vakawana chinyorwa chemanyoro ekare mudunhu reWest Bank, padyo neQumran Cave, pakawanikwa Mipumburu yeGungwa Rakafa muna 1947 uye vanovimbisa kukanda Chiedza chitsva pakuonekwa kweJesu Kristu.
Zvinyorwa zvitsva kuti dzave dzakaita pachena dzinobva boka duku revaJudha ezvitendero, uyo anonzi vaEssene, uye mudzokere mumakwara siyana zvenyaya New Testament uye Testamende Yekare yakafanana yeGungwa Rakafa, asi vanotsvakurudza vakafunga nezvenyu imwe chomudziyo unorondedzera kwaJesu Kristu uye chake nenzira yakasiyana.
Mifananidzo yakanyorwa pakati -408 uye 318 AD inotsanangura mwanakomana waMaria se "ane rima" ganda kupfuura vabereki vake, achizarura mashoko maererano neMuprofesa Hans Schummer.
Zvinyorwa zvitsva zvatsvaga zvakabudisa chiedza chitsva pamusoro pechimiro chaJesu Kristu, maererano naProfesa Hans Schummer weYunivhesiti yeTel Aviv.
"Zviri kureva kuti munyori asingazivikanwi wezvinyorwa zvakatsanangurwa nekushamiswa kukuru kuti ruvara rweganda remucheche rwaive rune rima kudarika iro ramai vake kana baba. "
"Mucherechedzo wemwana uyu ndeweusiku", anotiudza chikamu chemavara acho, "Muusiku husiku, hapana chaizotendera kuona mwana kunze kwevatsvene vemaziso ake" anotiudza chimwe chirevo.
Hamshet, hanzvadzi yaJosefa
Panewo zvakare kutaura nezveumwe munhu anonzi Hamshet, uyo anotsanangurwa sehafu yaJosefa. Hamshet aiva "Asina kutendeka" et "Kuwanda kwezvirwere"iye anounzwa seanopomerwa nehama yake "Ruramisa maitiro ake maduku" and mwanakomana "Kusina tsika"asi chinonyanya kufadza, maererano nenyanzvi yezvokuchera matongo Natanya Jeborah weYunivhesiti yeTel Aviv; Hamshet uye mwana anotsanangurwa sevafudzi nokuti ivo "Ivai nemuvara mumwechete weganda", chirevo chokuti Josefa haatore zvishoma.
"Munhoroondo iyi yekuzvarwa kwaKristu, ichi ndicho chinyorwa chinozivikanwa cheHamshet, mukoma waJoseh, uye kuti Josefa akaita seanozvidza kunyanya pasina chikonzero chaicho," Akati. "Zvinoita here kuti Hamshet ndiye baba vechokwadi vaJesu? Kunyange zvazvo zvimwe zvikamu zvinoratidzika kuti zvinotitaurira mune izvi, pasina humwe humwe uchapupu tinogona kungoita kuti tifunge, " akadaro mucheri wezvokuchera matongo.
Mwana waMwari aive "mutema seusiku" maererano nemipumburu mitsva, iyo inoratidza izvozvo Jesu akanga ari mutema uye wekuAfrica kubva kune vezvenyanzvi.
Sei Hamshet, hanzvadzi yaJosefa, ruvara rweganda?
Mamwe magwaro eApokirifa anotsigira kuti baba vaJosefa vaiva nemadzimai maviri asiwo musikana wechiAfrica anonzi Melcha. Kunyange zvazvo mazita ehama nehanzvadzi dzaJosefa asina kutaurwa, aive aine hanzvadzi dze4 nehama dze5. Zvinonziwo mwana akaberekwa kubva kubatanidzwa waJakobho nemurandakadzi wake mushure mekufa kwemukadzi wake wechipiri. "Izvozvo zvinoreva kuti nei Hamshet akanga ari nerima kupfuura hanzvadzi yake Joseph," maererano nenyanzvi yechiHeberu Mosesi Zuckenschtein.
"Kushandiswa kweshoko rechiHebheru rechiKushiti kana Cushi, iro rinonzi Aethiops rakashandurwa muchiLatin, kurondedzera Hamshet rinoratidzawo kuti akanga ari nerima kupfuura vaIsraeri venguva iyoyo. Kuti ruvara rweganda rake rakafanana neyomwana Jesu ari kunyanya kufadza. "
Jesu Kristu anga ari mutema here?
1 nyowani kubva ku € 12,49
kubvira waMay 26, 2020 3:15
MuMiddle Ages, vaMoor vanounza hupfumi kuEurope